Ahoana ny fametrahana / fampandehanana ny RPM Fusion amin'ny Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Zoma, Desambra 10, 2021 Alahady, Novambra 21, 2021 by Joshua James
Jereo ny RPM Fusion
Ampidiro & Alefaso ny RPM Fusion Repositories
Ohatra RPM Fusion
Mametraka & Mitadiava fonosana
Mametraka RPM Fusion AppStream Meta Data
Mametraka RPM Fusion Multimedia
Voaloto RPM Fusion Repos
Ahoana ny fanesorana (esorina) RPM Fusion Repo
RPM Fusion dia fitahirizana fonosana fanampiny ho an'ny Rocky Linux sy EL+EPEL izay tazonin'ny vondron'olona an-tsitrapo. Ny RPM Fusion dia tsy fitehirizana tokana fa fanitarana ny fonosan'ny Rocky Linux izay tsy azo ampidirina noho ny Rocky Linux voafatotry ny fameperana ara-dalàna mitovy amin'ny Red Hat.
Ny tahiry RPM Fusion dia tonga amin'ny tsiro roa, maimaim-poana sy tsy maimaim-poana. Ny tahiry maimaim-poana dia misy dikan-teny maimaim-poana amin'ny rindrambaiko izay loharano misokatra ary tsy maimaim-poana, izay manana saika ny rindrambaiko maimaim-poana rehetra fa loharano mihidy ary tompon'andraikitra indrindra.
Amin'ity lesona manaraka ity dia hianatra ny fomba fametrahana RPM Fusion amin'ny rafitra fiasanao Rocky Linux 8 ianao.
Ny asa voalohany dia ny manamarina raha toa ka efa mandeha ny tahiry RPM Fusion. Rehefa mametraka ny Rocky Linux ianao dia manana safidy hanangana trano fitehirizana antoko fahatelo.
Sokafy ny terminalo, ary ampiasao ity baiko grep manaraka ity, izay hanonta izay hitsambikina avy amin'ny lisitry ny repo dnf anao.
Raha tsy manana tahiry RPM Fusion ianao ao amin'ny lisitry ny repo dnf, dia hiverina tsy misy na inona na inona ny valiny. Raha izany no izy dia mandehana mankany amin'ny ampahany manaraka amin'ny lesona.
Raha hametraka ny repo RPM Fusion ao amin'ny terminalo ianao dia hanatanteraka ireto baiko manaraka ireto.
Mariho, raha mpankafy loharano misokatra ianao dia apetraho fotsiny ny tahiry maimaim-poana. Ho an'ny mpampiasa hafa rehetra, apetraho izy roa.
Raha hampiasa ny tahiry maimaim-poana dia ampiasao:
Mba hahafahan'ny tahiry tsy maimaim-poana:
Raha tsy izany, amin'ny fametrahana ny tahiry EPEL dia ampiasao ireto baiko manaraka ireto.
Manaraka, manamarina ny fametrahana.
Izany dia nampiseho fa ny tahiry dia nafarana mavitrika, mandroso bebe kokoa amin'ny fianarana ohatra sasantsasany amin'ny fampiasana RPM Fusion.
Azo apetraka izao ny rindranasa malaza maro izay tsy tonga ao amin'ny tahiry default an'ny Rocky Linux, toy ny Steam.
Mametraka ohatra Steam:
Karazana Y ary tsindrio ny ENTER KEY hanohy amin'ny fametrahana.
Raha hikaroka fonosana hahitana raha misy izy ireo amin'ny fampiasana ny mpitantana fonosana DNF, izay anisan'ny RPM Fusion ankehitriny, ampiasao ny baiko fikarohana dnf.
Ankoatra izany, ny fametrahana ny dnf-utilities package afaka mitondra vokatra tsara kokoa.
Avy eo dia ampiasao ny baiko fangatahana repo. Ny ohatra dia hanohy hampiasa ny mpanjifa gaming Steam.
Araka ny hitanao, ny fonosana Steam dia avy amin'ny tahiry RPM Fusion Non-Free. Ny tsara indrindra dia azonao ampiasaina ny dnf fikarohana ary jereo amin'ny dnf repoquery baiko hanadihady izay fonosana izay mampiasa ny dnf package manager.
Farany, mba hanonta ny lisitry ny fonosana rehetra azo avy amin'ny tahiry maimaim-poana sy tsy maimaim-poana, ampiasao ity baiko terminal manaraka ity.
Ny fanontana fonosana RPM Fusion Free rehetra:
Ny fanontana fonosana rehetra RPM Fusion tsy maimaim-poana:
Ny tahiry RPM Fusion dia manome fonosana ho an'ny GNOME sy KDE Discover.
Ny RPM Fusion repository dia manome fonosana sy fanavaozana ihany koa amin'ny filalaovana rakitra multimedia sy ny fifanarahana GStreamer.
Mametraka fonosana multimedia ho an'ny GStreamer Enabled Applications:
Mametraka fonosana feo sy horonan-tsary takian'ny fampiharana sasany:
RPM Fusion dia manana ny antsoina hoe "voaloto" repository maimaim-poana sy tsy maimaim-poana. Raha fintinina dia misy logiciel tsy ara-dalàna any amin'ny firenena sasany ireo trano fitehirizam-bokatra ireo, toy ny filalaovana DVD libdvdcss.
Mametraka fanohanana maimaim-poana Taint RPM Fusion (Ho an'ny fonosana Floss) ary libdvdcss:
Mametraka fanohanana tsy maimaim-poana Taint RPM Fusion (Ho an'ny fonosana tsy misy floss):
Rehefa vita dia ampiasao ny baiko grep hanamarina ny dnf repolist amin'ny RPM Fusions rehetra napetraka ankehitriny.
Ny fanesorana ireo tahiry amin'ny rafitrao Rocky Linux dia mora. Mba hanesorana ny repository dia mila mitady ny anarana ianao ary mampiasa ny baiko dnf remove, fa aloha, ataovy izay hahazoana ny anarana feno. Izany dia azo atao amin'ny fampiasana ity baiko manaraka ity.
Sokafy izao ny terminal ary ampiasao izao manaraka izao.
Mba hanesorana ny tahiry maimaim-poana dia ampiasao:
Mba hanesorana ny tahiry tsy maimaim-poana dia ampiasao:
Mba hanesorana ny tahiry Free (Tainted), ampiasao:
Mba hanesorana ny tahiry Tsy Maimaim-poana (Tainted), ampiasao:
Raha te-hametraka indray ny fiara Fusion, avereno ny dingana eo am-piandohan'ny lesona.
Ao amin'ny lesona dia nianatra ny fomba fametrahana ny RPM Fusion repository maimaim-poana sy tsy maimaim-poana miaraka amin'ireo tahiry voaloto ao amin'ny rafitra fiasanao Rocky Linux 8.
Amin'ny ankapobeny, ny RPM Fusion dia ampiasaina amin'ny fizarana karazana RHEL, ary safidy tsara ho an'ny fahazoana fonosana izay tsy misy amin'ny alàlan'ny default raha mbola mampiasa ny mpitantana fonosana dnf fa tsy mametraka tanana na mampiasa serivisy antoko fahatelo toy ny flatpak na snap. .
Raha hikaroka ny tahiry tahiry RPM Fusion ho an'ny fonosana, visit here.
Sokajy Linux Rocky Tags RockyLinux 8, Fampifangaroana RPM Post Fikarohana
Ahoana ny fametrahana Python 3.11 amin'ny Linux Mint 20